Izibalo zango-2011 Ekumaketheni Kokusesha kanye Nezindaba Zomphakathi
ULwesine, April 14, 2011 NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 Douglas Karr
Namuhla ekuseni, ngiyafunda Umbiko Wokumaketha Kokusesha we-eConsultancy wango-2011. I-State of Search Marketing Report 2011, ekhishwe yi-Econsultancy ngokubambisana ne SEMPO, ibheka ngokujulile ukuthi izinkampani zikusebenzisa kanjani ukusesha okukhokhelwayo, i-search engine optimization (search yemvelo) kanye nokumaketha imithombo yezokuxhumana.
Lo mbiko, oqukethe nokulinganisa emakethe, ulandela ucwaningo lwabaphenduli abangaphezu kuka-900 abavela kuzo zombili izinkampani (abakhangisi abaseceleni kwamakhasimende) nama-ejensi, futhi usekelwe kwimininingwane evela emazweni ahlukene angama-66 aqoqwe ngoFebhuwari nangoMashi 2011.
Lokhu okutholakele kuhlanganisa ukusetshenziswa kwemali, izinselelo zamanje, ukusetshenziswa kwezinjini ezithile zokusesha kanye nezindlela ezivelayo ekuseshweni okukhokhelwayo, i-SEO nemithombo yezokuxhumana. Lolu cwaningo, olwumbiko wesithupha wonyaka we-SEMPO State of Search Report, futhi luqukethe izitayela zonyaka nonyaka nokuphuma kokutholwe yinkampani nabenzeli esigabeni ngasinye.
Ekufundeni lo mbhalo, ushintsho olulodwa olukhulu engiluthole kube wukushintshwa kwesabelomali okumangazayo kusuka kokuphrintwayo kuye ekusesheni nasekukhangiseni nasezinhlelweni zokuxhumana. Ngaphezu kwengxenye yabaphenduli benkampani (53%) basusa isabelomali kusuka kokuphrintiwe! Ukuphrinta kwe-imeyili eqondile kanye nomkhondo wethelevishini kodwa kuyathinteka futhi.
Ngaphandle kokusesha nokwenhlalo, enye indlela yokuthola ukunakwa okuningi ocwaningweni iyiselula. Qinisekisa ukuthola izandla zakho kulo mbiko - ungomunye wemibiko eningiliziwe engike ngayibona isikhashana ngesimo semboni yezentengiso yokusesha - ikakhulukazi maqondana nezinguquko kwezinye izindlela neziteshi.
Tags: 2011ukucubungulaukuphrintaSesha Marketingisabelomali esishintshayoSocial Media Marketing
I-Emailvision Iqhubeka Ngokuthuthuka nge-SmartFOCUS